Daawo Video: C.kariim Qalbi dhagax oo Kismaayo soo dhowayn kala kulmay | KALSHAALE
Daawo Video: C.kariim Qalbi dhagax oo Kismaayo soo dhowayn kala kulmay
Oct 12, 2018 - 32 Aragtiyood
Kismaayo ( Kalshaale) Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbidhagax oo kamid ah Saraakiisha ONLF ayaa maanta gaadhay magaalada Kismaayo isagoo ku guda jira booqasho uu ku marayo qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Soomaaliya.
Qalbi dhagax ayaa garoonka diyaaradaha Kismaayo waxaa ku soo dhaweeyay qeybaha bulshada iyo madax ka tirsan maamulka Jubbaland,waxaana uu ka soo dhoofay magaalada Dhuusomareeb halkaa oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay uu ku sugnaa.
Soo dhaweyn kadib hadal kooban uu Qalbi Dhagax warbaahinta siiyay ayaa waxa uu ku sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu gaaro Kismaayo, isaga oo uga mahadceliyay shacabka reer Kismaayo sida Soomaalinimada leh ee ay u soo dhaweeyeen .
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (32)
Kismaayo kama jiro Governor ay doorteen golaha deegaanka Jubbo ee waxaa joogo Gacanyarihii Xassan Turki iyo Xassan Daahir oo horey u ahaa Madaxdii UGUS AXMAARO.
Halka arin ee lagu saarikaro Kuukuuyo, laguna bad baadinkaro shacabka Juubooyinka,iyo Dhirta Jubbooyinka waa in Qalbi-Dhagax lagu bedalo Axmed Cadde Garmadoobe.
Axmed asagaa xor u ah, hadduu imaan Xamar ama Dhagax-Buur ku laaban, ama Nairobi moodi Caasimad Soomaaliyeed.
Shacabka Caanaha keeno Kismaayo iyo kuwa ku yimid Doon iyo Dibile waa iney iska kaashadaan Isbedal Caafimaad qabo, oo aan ku imaanin is xambaar shisheeye iyo Duulaan Caadifeysan.
* Kismaayo waa nabadda iyo Colaadda Koofurta Soomaaliya.
Waxaan hadeer daawaday khubad uu ka jeediyay sarkaal ( gaashaanle dhexe) xaflad musharax madaxweyne ee dalka Puntland.
Sarkaal-ku wuxuu dhahay ciidanka tukaraq Haraad iyo Gaajo ayuu u dhimayaa!
Sarkaalku wuxuu sheegay in shaqadiisa ama uu yahay masuulka dhisida mooraalka ee ciidamada Puntland.kkkk
Isagiina waa mooraal jab!
Xoolihii dhulbahante waa ogaa in askarta Dhabayaco lagu baananayo!kkk
Waa kan sarkaalka ka mida ciidanka ayaxa cuna ee dalka Puntland oo afka furtay!
Laughing is granted.
Ragow waxbaa qaldan! Hargeysa, Bossaso, Galkacyo ma Kismaayo ku xigtay oo Qalbi Dhagax ka dul booday Xamar iyo shacabkii Xamar dibedda u dhoobnaa! Yaab!
Mise Jac la maagan yahay iyo in ku dhaarto in ku dhimandoono Xamar oo dhinac uga baxayn…!
Mise odaga Qalbi Dhagax wuxuu moodaa kuwii sirey oo inta ku shaqaysteen hadana cadowgiisa u dhiibay in Xamar leeyihiin!!
Sxb Mooryaanta iyo beesha Hawiye kala saar..
Hawiye waa laandheere weligood Miis wax looguma qaybin oo xitaa Daroodka ayagaa ka daran..
Hadaad aragto Harti isdiidan ama Kablalax iyo Darood, waxaa ka daran kaalay Mudulood, Abgaal ama Habargidir midee!
Qalbi Dhagax Xamar usoo socdaa taas anaa huba!
Aniga waxaan u arkaa daanyeer shufto ahaa oo maanta nabad qaatay, sida Roobow oo caawa raba in South West Somalia; Baydhbo, Afgooye, Wanleweyn, Marka, Baraawe, Shalambood, Qoryooley,Buurhakaba: idinka dhulka ma taqaanaan ee Somali dhul sare, Daanyeer Roobow Madaxweyne u noqdo rabo! dadku shalay gacmaha ka jarayey oo xitaa hilib Shurwaa ku qasbay in cunaan.
Waa daanyeer ogyahay NuurkaNederland cidda u shaqeeyo..
Waa hadal run ah, in Roobow dad Somali ah hilib dhurwaa jeedal ku cunsiiyey!
Ogaada ninka noocaas marka la doorto, Somalia cadowgii Alshabaab aasaasay ayaa xukuma!
Somalida dad yar ayaa wax og!
waar waa ku salaamay marka hore;
Labaad Xamar iyo Dawlad Federaal hadaan Puntland ku kalsoonay, yaa idinku qasbaya inaad ku sii jirtaan?
Sadexaad sarkaal-kan ciidanka Puntland u qaabilsan MOORAAL WANAAJINTA ee isagii muraal jabsan maxy waaye?kkk
Bal dhegayso markuu leeyahay “waxaan gaadhnay in maatadeenii la dhaho ka qaxa Garoowe. Waan in dalka Puntland loo doortaa, cid kuwa hada jooga dhaanta’
Ma caruur baa tahay? Hadaan reer Barigii Xaafuniyiin loo yiqiinay Kismaayo dhisan caawa Kismaayo waxay ka tirsanayn lahayd Kenya..
Bal noosheeg dadka lagu dul habsaday agayoo Somali ah oo jecel Somalimo, sanadii 1880.
Bantu iyo Baajuun Mombassa diiday oo reer Bari raba ka waran.. ?
Mise Gaaljecel ayaa Raaskamboni iyo Kismayo Somalia kusoo daray ama degenaa waqtigaas!
Ibraahim Uunlaaye doon keentay ayaa yaabay..
Guri ninkii dhistay ayaa leh….niic maxay tarin..
Dabshid bal noo sheeg guri Hiraab ku lahaa Kismayo/Jubbaland!1960 ka hor..?
Car hal magac keen? Anigan1890!00 Harti iyo Ogaden lagu heshiisay Kismayo Harti, wixii Yoontooy dhaafa ilaa Afmafow Ogadeen leh…
Waa sidii Mudug, Jalaf iyo Khalaf jidka badda ka xiga Hiraab, wixii Galbeed ka xiga Darood..
Runtii dagaalkaas xooga laga nafisay…..
War orod rag doono, Kismaayo sita Xamar ku habsada..anukaa leh ka dhacdo..
Adiga iska hadlaysaa bal noosheeg tuulo Hiraab dego Jubbaland aad caawa dhan u dhaaranayso!
Mr Bahal aka Turdho ayaa soo helay meel Turdho la yiraado oo Habargidir degto, kkkkkkkk
Wuxuu ogaaday in oday tv ka arkay meel iska yiri tahay arkay.. There’s no place called Turdho in Jubbaland..
Hadda Dabshid wuxuu u hadlayaa in reer Waamo cirka kasoo dhaceen..
Ma oga ma jirin farqi u dhaxeeyey Mombasa iyo Kismayo.. Reer Bari degay ayaa Somalia kusoo daray la’aantoodna xuduudka Barraawe ahaan lahaa!!
Halqabsi u ahaa Raascasayr iyo Raaskamboni waa dal Somali..
Halqabsi u ahaa Raascasayr ilaa Raaskamboni waa dal Somali.
Dee berigii laga soo galay oo Garissa iyo Wajeer Daanyeer Engriis hoos qalin ku xaday.
Reer Barigii Kismayo degey rag noqdeen oo dhulkoodii Somali ku darsadeen.
Aabahay AUN cid kama badin taariiqda sida gaalo noo kala qaybisay..
Malaha xabsigiisii waxaa uga soo dhex baxay dano siyaasadeed.
Maanta ma waxay kaa maraysaa anoo been sheega waad arki jirteenee anoo galgalanay miyaad arki jirteen.
Reer barigu wey lahaayeen dad badan oo wanaagsan balse taariikhdoodii waxaa qariyey qolyihiinan danbe iyo erayga annag….annaga..annga:.
Addis nin lagu xirey oo aan siyaasad cusub la soo laaban waligaa ma aragtey.
ACWW:Shacabkii habaarnaayow maxaad sheegteen?
War ninkan waa muwaadin la dumlay,balse waxaa ii muuqata in karaamaddii laga dilaayo waxaa ila qurxan in uu is ilaaliyo oo arrimaha jabhadaynta,qabaailka,danaysiga iska ilaaliyaa.Micno weyn ma leh magaalo uu tago waa dalkiisii dadkiisii balse qolyo ayaa dano gaar ah u isticmaali doona.
Sxb siduu MJ u deganaa ama ku yimid Xamar, ayey ku tageen Kismaayo.
Waqtigii kala guurka waxey noqotey in Jufo kasto xaar xaarato meeshay caanaha keento.
– Xamar ayaa ku soo xigto markii Distance la fiiriyo.
Doonta miyaad ka xanaaqdey, Haye Dibile ayaad ku timaadeen. Hal number ayaan kaa jarey.
@Kalahage arrinta uu leeyahay LOP reer bari baa gaalo kula dagaalay waxaan haynaa reer barigu in ay talyaaniga jaajuusiin u ahaayeen.
Taariikhda Jubaland waxaan maqalnay dad la leeyahay gaalo madow booran iyo cadaan ayay dagaalameen,waan maqalnay absame iyo harti dagaalamay balse anigu ma maqal reer bari gaalo cadaan iyo madow kula dagaalamay taako jubaland haddii ay jirto waa arrin igu cusub.
Jubaland waa qurux badan tahay waxaana laga helayaa somali oo dhan waana wax lagu faani karo.
Reer bariga sx lop sheegay doomo ayay ku imaadeen xaqiiqatanna marka laga reebo dadkaan reer guriga,dadka kale waa iska kooytooy reer bari ma lahan reer guri waxaana lagu kala garan karaa lahjadda ay ku hadlaan.
Ilma wala weyn ma hadal uun baydun wadi.
Waar maxaa Armaajo iyo Khayre labo sano ka dib idiin soo kordhiyeen?
1. Dhul lama xoreeyn
2. dadkii sidii baa loo qarxinayaa
3. Dibad u dhoof iyo isawir madaxdiina waajib-ka koowaad lee ka dhigteen.
4.Baarlama-kii waa la iibsaday,ma hadli karo.
Olole dib u soo noqosha ah baa hada bilawday noo?
Dawlada Xamar maxay hada uga qaylin weyday DP World markay belawday balaadhinta dekada Xamar?
Warqad goorma ayay UN-ta u qorayaan?
Dawlada Xamar maxay hada uga qaylin weyday DP World markay belawday balaadhinta dekada Ber-Bera?
Adiga Daanyeer fadhi kudir cuqdad hadla ayaa tahay, waqti uma hayo niicdaada.
Aan Xamar ku noqono. Xamar ilaa Mombasa ilaa Zensibar waxaa xukumay Siciid Barqash, macal Xamar.. Ma la socotaa in Cali Yusuf ka gatay Xamar saas Somalia ku noqotay, adna Kismaayo ayaad ka hadlaysaa!! Kkkkkkk
Ma la socotaa Caasumadda waqtigaas umadda Somalida loo aqoonsanaa ay ahayd magaalada Harar.
Xamar ilaa Zansibar; Maanta Tanzania, Cumman koloni loo aqoonsana ahayd?
Daanyeer baa tahay!
Xamar ayaa baxar gashay in Somali lahaato adna Kismaayo ayaa ka hadlaysaa..
Haddii Caasumadii naloo aqoonsanaa ee Harar, Ras Mekonen ” Xayle Selasse aabihiis qaatay, maxaa u diiday in Kenya qaatada Kismaayo.
Xaqiiqda markii laga hadlo reer barigu wey lahaayeen dad badan oo doonayey dawladnimada soomaalida balse wey jireen qaar la shaqeysanayey talyaaniga sida soomaalida kale.
Taariikhda waxaan ku hayaa dadkii ugu badnaa ee degaanka jubooyinka ka ololeynayey iyaga ahaayeen.
Balse dhaqan xumada maamulka puntland ku dhaqmayey 20 kii sano ee u denbaysay ayaa wanaagoodii oo dhan qariyey.
Waxaa isu kay qaban weyday soomaali baan booqan iyo xamar baan ka boodi.
Maxaa iska galay qofka aad isku dhacdeen iyo shacabka soomaali ee kuu heelan.
Qof aan xamar tagin ma la dhihi karaa meel buu tagay.
Wixii aan kusoo qoray waa la tirtiray..
Kkkkk mise aniga wax iga qaldameen.
Hadalkayga muhiinkiisa wuxuu ahaa in duur isku ooday Puntland ayaa Chance siiseen.
Miis laguugu tashanayo ayaad ka maqan tahay.
Ma kula tahay in tuuladii Garoowe lagu hakan lahaa hadii wafti Xamar ka yimid Hargeysa lagu soo dhaweyn?
Waxaad wax fahmin mar Boosaaso ka weyn tahay Hargeysa..
Gafuur cawo ninkiis ayuu dhibaa!
10 sano soo socota yaan arkin idinka miiska yimid mar xitaa sidans socdo fahmi karin……
Dowladda Dhexe ma diidana horumarinta dekedda Berbera laakiin waxey diidaneyd Itoobiya ayaa qeyb laga siiyey Dhaxalka Caruurta Soomaaliyeed.
Hadda ka laabatey Itoobiya boobkii dekedda Berbera, marka waxba kama qabno PW iyo MW shirkaddii horumarin.
Yes Shaqo abuur
Ma dumaashidaydii Swidish-ka ahay baa qoraal-kaaga tir tirtay!
Bal dib u soo qor wixii lagaa masaxay!
Qalbi-Dhagax wuxuu ku jiraa salaan iyo isbarasho goboladaa, ka dib ayuu raa inuu aado Xamar oo uu u booteeyo Xerta Villa Xamar.
Waxaan filahayaa uma hanweyna Kursi ka sareeyo Kismaayo.
Waa weekend ee yaan lagu adkeyn Land of Punt,
Caruurtiisa ayaan u naxaa –
Boqor Cismaan ayaa Portuguese ka gatey Xamar, ka dib si Zeko iyo Sadaqo ah ayuu u wareejiyey, oo ka doortey Saxaraha Bari.
Yacni Kaneecada ayuu ku nacey Xamar iyo dhulka Webiga, sidaas ayuu Burtinle Bari uga marey.
Tolnimo hadey jirto Qurbaha naga celiya
Itoobiya heshiiska sida ay u gashay bay ugu jirtaa.
Maxaa adiga iyo villa Soomaaliya ka samayn kartaan?
Waraaqo deg dega u dira ilmaa-deeradiin beesha dhexe!
Run ayaan kuu sheegay!
Nin kaa fulaysan ma soo galo Kalshaale.ca
Markaad waxa ka jawaabi karin in dambi ibnu adamnimo igasho xoog baday= waa week end, macnaha LOP waa sakhraan…fir uma lihi in week end waasho.
Aniga agtayda mooryaan cuqdad Majeerteen la jiran ayaa ka tagay.
Waxbadan meelaha waad ka niickayn.
Fucking gun is qariya.
Aniga Majeeeteen ahay weli hilib hoose Cumar Maxanuud.
Car rag hadaad tahay cidaada sheego caawa. Ileen intaas Majeerteen in adoon adiga iyo firkaaga u ahaayeen sheegtaa, weliba adiga oo is ogeyn.
Yaan kuu dilaa caawa hadaan rabo on jilibkaaga ka aarsado.
Adiga iyo mr Bahal labo midgaan oohintiina waa i dhibtay.
Week End ayaa yaabay.
Hadalkaan ka feker in miiska Somalia joogin Iidoorka yaa ka faaiday?
Anaa kuu sheegin: Puntland….kkkkk
Aakhirkana waa imaan miiska mar talada meel ka bilowdo aqoon.
Cabdiraaq Xaaji Xuseen ayaa cunay warqad ay ku qornayd sirti S Y L.Cudurka qaaxada ayuu ka qaaday.Haatan waxaa ku hadlaysaa sheekadii Edookinkaa iyo Adeeradaa saysteen,markii ay waayeen Taariikh fiican oo ay ku faanaan.
Kismaayo waxaa ku geeyay Talyaaniga oo aad hayd shaqaale.Kuwo timaha u xiira,kuwo dharka u maydha,kuwo guryaha u xaadha -ilaa 600 oo Majeerteen ah ayay gaystay Kismaayo.
Waxaa la odhanjiray Booyda Talyaaniga.Rag qabta shaqada ay dumarku qabtaan dhaqan ahaan.Talyaanigu may wadanin Dumar.Waxay ahayeen Rag ciidan ah oo dhuldoon ah.Halkii Dumarka waxay heleen ragaasi Majeerteen oo ka kaxaystay Degaanada maant la yidhaa Puntland.
Intaa ka dib,wuxuu qortay Askar Majeerteen ah.Iyagana wuxuu geeyay Kismaayo.Labadaa jeer ayuu Talyaanigu Kismaayo dejiyay Majeerteen.
‘Wixii la qoraa quruumo dhadhee,muxuu hadal qiimo leeyahay”.
Dadka ka xishoo.Hadaad xishooto,waa lagaa lagaa xishooon.
Markii gaalo timid Somalia oo ahayd qiyaas 1890-1901… Ka hor ciidan kuma imaan marka laga reebo Xeebo sida Berbera.
Kismaayo waxay ahayd Magaalo Reer Bari u shidan oo la Somaliyeeyey.
Bari waxaa ka jiray Boqortooyo adag oo Ciidamo leh.
Hobyo oo markaas Galkacyo ilaa Beledweyne laga xukumey waxaa haystay boqorka Bari Ina adeerkiis.
Bah Dir vs Bah Yacquub.
Labadaba waxaa jabiyey dagaal dheer gaalo la galeen boqortooyadoodii.
Raggii Cali Yusuf oo Cabdulahi Ciise, Cisman Sharmarke, Cali Sharmarke ka mid ahaayeen Talyaani Xamar ka hurdi waayey, Cali Yusuf xabsi ku jiray.
Boqor Cisman Baargaal xarun loogu geli waayey ka dhigtay oo Bandar Qassim aka Boossaso markii Darawiish iyo Gaalo midba dhinac kala dagaalayo oo Maxamud Cali Shire, Warsangeli Suldaan oo garab adag u ahaa inta Engiriis qabtay lagu xiray Sicelles, Boqor Cuman Baargaal loogu geliwaayey.
Hadaadan tariiqdaas geyn maanta internet ku jirtaa.
Majeerteen Suldanate or Majeerteen King / boqor Cisman most welknown King.
Cidna abaal in reer Barigii gaalo ka dhacsaday Jubbaland kaa sugi mayso, maanta waa dhul Somali oo Somali wada leedahay, Darood ha u badnadee, kollay Hiraab ma dego laakiin waa soo degi karaan, cidna kama horjoogo.
Raxanweyn aka Eelay waxay degeen oo wax ka dhisteen Bossaso.
Majeerteena Baydhaba way degi karaan kii ka hela.
Taariiq lee ka hadalnay Boowe.
Ninkaan tariikhdiisa si fiican uma aqoon OO marki la qabanay waxaan u haystay mujrim dadka gawraca. *HADDA hadduu yiri; “XAMAR tegimaayo” ma garanayo siduu Somali ku sheegan karo. Ma wuxuu mooday inay iska leeyihiin Farmaajo/Khayre? Adeer MAYA!!! waa magaaladi Sangub & Xasan Sheekh Muumin ILAAHAY iyo kooxdooda mooye banu Aaden kale uma baahna. Ha noolaado firki SYL. WBT